အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: လူလွတ်ယောက်ျား = နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်…???
Posted by တီချမ်း at 2:00 AM
Crystal August 25, 2010 at 6:58 AM
အင်း လူလွတ်လို့ သုံးနှုန်းထားတာကို သဘောကျတယ်ရှင်။ သို့သောလည်း မိန်းမတွေရဲ့ သဘောထားအမှန်ကိုတော့ လွဲနေသေးတယ်လို့ စောကျောမိချင်ပါရဲ့။ :)
စန္ဒကူး August 25, 2010 at 9:37 AM
သိပ်တော့နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်အိပ်ခုတင်က နွေးထွေး ရင်းနှီးကြင်နာတာထက်... တစ်ယောက်အိပ်ခုတင်က ပိုမကောင်းဘူးလား..
အခုထက်ထိမွေးကတည်းက ၁ ယောက်အိပ်ခုတင်နဲ့မအိပ်တတ်ဘူး။ နှစ်ယောက်အိပ်ခုတင်အကြီးမှာ တစ်ယောက်တည်း ခွေခေါက် ကန့်လန့် အိပ်ချင်သလိုအိပ်တယ်..
အန်တီချမ်း August 25, 2010 at 10:30 AM
ကိုယ်က မိန်းမ အများစု ကို ဆိုလိုတာပါ ကိုယ့်ရဲ့ လိမိတက် နော်လစ်ဂ်ျ နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် (တော်တော်ကျယ်တာပါ) မှာ မြင်နေရတဲ့ desperate but not YET housewives တွေ ကြောင့်ရေးဖြစ်တာပါ
သိပ်လည်း လှိမ့်မနေနဲ့ ပြုတ်ကျရင် လာကောက်မယ့် လူလွတ် မရှိသေးဘူးဟုတ် ....? စတာနော်.............